Cingkpọpu Tools Manufacturers, Suppliers - China ịkpọpu Tools Factory
12 PC Isi ịkpọpu Ngwunye Ngwunye Ngwa maka Ntị Otube Nose Tụkwasịnụ
12pcs Conical perforation ngwá ọrụ kit Aha: 12 PC ịkpọpu ọla cone set Size: 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.4 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0mm Ojiji: Tatoo & ịkpọpu ihe: igwe anaghị agba nchara 12 nchara ntinye cones 1.6 ka 11mm. Ntinye cones bụ wideners (ma ọ bụ spacers) na-agwụ ike na isi iji nwee ike ịkwanye site na ọla ịchọrọ ịtinye dịka mgbanaka dịka ọmụmaatụ. Ihe ntinye nke cone a gụnyere nha ndị a (mgbanwe +/- 0.1mm): 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.6mm, 5mm, 6mm, 7mm ...
8 pcs ọkachamara igwe anaghị agba nchara agịga Pincers Tweezers Isi igbu & ịkpọpu Ngwá Ọrụ Kit
Urgicalwa Ahụ Steel Belly Tool Ear Tongue Septum ịkpọpu Tools egbugbere ọnụ Tweezers mwekota Pliers nso nso ịkpọpu Ngwá Ọrụ Nịm 8pcs Isi ịkpọpu Forceps Kit 8pcs ịkpọpu akụkụ pliers ka Ojiji: ịkpọpu Kit Ihe: igwe anaghị agba nchara, Plastic, Ọkpụkpụ (Aka) Agba: iche iche na agba ejiri dị ngwugwu: Akpụkpọ anụ igbe 8PC ỌR P AKW PKWỌ AKWADEKWỌ AKW WKWỌ AKW WKWỌ W / KWES WRADE N'INLỌ NTAKW STKW STKW STKW STKW SKW ANDKW ANDKW ANDKW ANDKW ANDKW ANDKW ANDKWỌ ahụ na ego maka ego nkọwa: Ọkachamara ụdị ịta ahụ, mepụta ahụ gị ...
1pc Tattoo Bead Ball Grabber 4 Claw Igwe anaghị agba nchara Gem Holder Isi ịkpọpu Ngwá Ọrụ
Tattoo Bead Ball 4 Claw Grabber Stainless Steel Grabbing Tool for Body Piercing Ball Removal Insertion Product nkọwa Onye na-ejide beads bụ karịsịa maka akara bekee, bọọlụ na-ejide ya na ihe ndị ọzọ samll na-ejide. Igwe anaghị agba nchara na ìhè arọ, inogide na mfe na-ebu. Atụmatụ: Ejiri igwe anaghị agba nchara, na-adịgide adịgide karị. Anti-skid ahụ imewe, ala jidere. Emere ya maka ijide beads tattoo na bọọlụ. Kwesịrị ekwesị maka ijide diamond ma ọ bụ obere okwute. Lig ...
Igwe anaghị agba nchara Isi ịkpọpu Hemostat Forceps & Pliers
Ihe: 316L igwe anaghị agba nchara niile Jiri 316L Medeical igwe anaghị agba nchara, Can nwere ike iji Safely.It Bụ Ezi Onye Inyeaka N'ihi Pierkpọpu Ọrụ 100% Brand ọhụrụ na elu mma. Ọkachamara nke nwere mkpofu na mgbochi nfụkasị. Igwe anaghị agba nchara. Ngwunye na-adaba adaba na nje ọ bụla ngwugwu 1 PC Piercing Ngwá Ọrụ siri ike ewu: Isi ịkpọpu ngwa mkpaji nwere ike oruru na elu okpomọkụ. A na-eji ihe ndị dị elu eme ihe ndị ahụ, na-arụ ọrụ ma na-adịgide adịgide. Ejiri nlezianya rụọ ọrụ ndị ahụ ...
1) Nnọọ nkọ & Easy ịkpọpu 2) Meela ya n'ezie n'ezie na ISO 9001 nkọwa na European OA 0197 akwụkwọ, Onye na-juru n'ọnụ na tupu-steriled na EO gas, 3) Sterilized site Ethylene Oxide. Na-abụghị egbu egbu na-abụghị pyrogenic. Bibie mgbe otu ojiji. 4) 50pcs na ngwugwu ọ bụla. Typedị :dị: hedị Tatụ Katị Mkpọpu Mkpa Agịga: 316 Medical sterilizing igwe anaghị agba nchara: 14G, 16G, 18G, 20G Agba: Agba agba: 50pcs / igbe Gịnị bụ nkọwapụta maka MOLONG Tatịpu ịkpọpu Mkpa? M ...
100PCS / Box Single n'otu n'otu Independent juru n'ọnụ Disposable igba ogwu Tattoo Isi ịkpọpu agịga
Sterilized Isi ịkpọpu agịga, Independent Pack ịkpọpu agịga Surgical Steel Sterilized Isi ịkpọpu agịga Single packed Mixed Sizes 20G = 0.8mm, 18G = 1.0mm, 16G = 1.2mm, 14G = 1.6mm, 13G = 1.8mm, 12G = 2.0mm. Size: 20G 18G 16G 14G 13G 12G Adopt 316 medical steel, more safe and health, disposable mbukota, igba ogwu site EO Gas mbukota: 100PCS / igbe Product :dị: attkpọpu akụkụ agịga Ihe: 316 Medical sterilizing igwe anaghị agba nchara Size: 12G, 13G, 14G , 16G, 18G, 20G Agba: ọlaọcha Ogologo: 50mm Specificat ...
Igbapu igwe anaghị agba nchara Disposable Isi ịkpọpu agịga
Disposable mgbapu agịga / perforated agịga Product ojiji: Ọ ga-eji maka mgbapu na perforation nke ahu imi, ara mgbanaka, n'ime eriri nwa mgbanaka, ntị onu, wdg Product nkwakọ ngwaahịa: environmentally friendly agụụ anọchi onwe ha nkwakọ ngwaahịa atụmatụ: Onye ọ bụla na-iche iche packaged, nchekwa na ịdị ọcha, nkedo agịga dị nkọ, ọrụ ahụ siri ike, na gloss dị mma, na nkọwa zuru ezu! A na-eji ọka EO emepụta steepụ niile. (ethylene oxide) Aha: ...
5PCS & 3PCS ịkpọpu Forceps attgbanye Kit
Ọrụ Isi ịkpọpu Kit Otube Ear Ire ịkpọpu Ngwaọrụ - Mkpanaka Mkpa aha ngwaahịa: ịkpọpu Forceps Tatịpu ịkpọpu Kit Ọrụ: ịkpọpu & Tattoo Ihe: craftgbọ elu Aluminium Alloy CC-008 5PCS ịkpọpu Forceps Tattoo ịkpọpu Kit mbukota gụnyere 1 mgbanaka na-emechi plier 1 mgbanaka openning plier 1 forester forcep 1 septum forcep 1 slotted pennington forcep 1 alloy ikpe 1 na-ezi VCD ụfọdụ ịkpọpu Jewelị ụfọdụ ịkpọpu agịga CC-009 3PCS ịkpọpu Forceps igbu cingkpọpu Ki ...